गर्भवतीलाई कोरोना, अस्पतालले उपचार गर्न नमानेपछि बिजोग « गोर्खाली खबर डटकम
२०७७ असोज १२ गते सोमवार प्रकाशित
काठमाण्डौं । कोरोनाले सबैको जीवन प्रभावित भएको छ । अझ बालवालिका, जेष्ठ नागरिक, गर्भवती र बिरामी थप जोखिममा छन् । कोरोना पछि अस्पताल भन्दा घरमै सुत्केरी हुनेको संख्या बढेसँगै यस कुराको पुष्टी भएको छ । अझ अस्पतालले कोरोना पुष्टि भएकाहरुको उपचार नगर्ने र भर्ना समेत नलिने अवस्थाले उनीहरुको जीवन भप जोखिममा रहेको छ । पछिल्लो समय बीरगञ्जमा यस्तै घटना भएको छ ।
वीरगंजमा एक २६ वर्षीया आठ महिनाकी गर्भवती एक्कासी बिरामी भइन् । उनलाई श्वास लिन समस्या भएपछि सीता हस्पिटलकी स्त्री तथा प्रसुती रोग विशेषज्ञा डा. निलम चौरसियाको क्लिनिकमा लगिएको थियो । डा निलमले फिजिसियन कहाँ रेफर गरिन् । छातीमा समस्या देखिएको भन्दै चिकित्सकले तत्कालै नारायणी अस्पतलामा पीसीआर परीक्षण गर्न पठाए । उनको कोरोना पोजेटिभ आयो । त्यसपछि नारायणी अस्पतालका चिकित्सकहरुले उनलाई भर्ना गर्न मानेनन्् ।
ती कोरोना पोजेटिभ गर्भवती लिएर महिलाका दाजु अस्पताल र क्लिनिक धाए तर कतै उपचार भएन । त्यसपछि उनी प्रहरी कहाँ हार गुहार गर्न पुगे तर त्यहाँ पनि सुनवाई भएन । नारायणी अस्पतालका चिकित्सक डा. उदयनारायण सिंहले नारायणी अस्पताल कोभिड अस्पताल नरहेको र शंकास्पद केसलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि कोभिड अस्पतालमा रेफर गर्दै आएको बताए । उनले गर्भवतीलाई बाबा होटलमै भर्ना गरी उपचार गर्न उपयुक्त हुन सुझाव दिए। गर्भवतीलाई भर्ना गरी निमोनिया ठीक गर्नु छ, शल्यक्रिया गरी डेलिभरी गर्नु छैन, कोभिड अस्पतालले भर्ना गर्नु ठीक होला, उनले भने
यि हुन अमेरिकामा भासिने नेपाली कलाकार, अमेरिकामा नेपाली कलाकारको लर्को: कहिले राेकिएला प्रतिभा पलायन ?…..(तस्बिर सहित)